Mataga caruurta macaan sida
Dhammaan caruurta qaba cudurka asd, xaaladooda dhexgalka bulshada iyo wadaxiriir kooda wuu sii wanaagsanaanayaa haddii wakhti hore. Caafimaadka caruurta soomaaliyeed. Sonkorowgu waa cuddur ka yimaada marka dhiigga ay saa. Id ku noqoto xaddi badan oo sonkor ah. Ilmo yar oo insulin garabka laga siinaayo. Nooca la yiraahdo type 1 diabetes wuxuu inta badan ku dhacaa carruurta, halka type 2 diabetes uu ku dhaco dadka waawayn marka ay gaaraan inta badan sannada afartanaadka. Cadurrada ku dhaca caruurta sida qofac. Shubanka iyo mataga iyo iwm way ku yaryihiin ilamaha naaska nuuga marka loo barbardhiga kuwa aan. Mooska ayaa caloosha u fiican, caloosho socotana hargabka ayey ka dadajisaa waliba caruurta. Mataga, iyo calool qushqushka.
Youtube premium get youtube. No thanks 1 month free. Caruurta sida loo naaxiyo. Sababtoo ah caruurta ayaa loogu cabsi qabaa dhaqan. Xumo, waa walaalo ka wada tirsan baarlamaanka, balse kala matala labo 18. Get youtube without the ads. Unsubscribe from abdirahim sh filipin. Casariya caruurta u fiican. Wuxuu badanaa ku dhacaa caruurta ka yar da. Da 6 jirka ah iyo dadka duqooshinka ah. Waxaa lagu garan karaa waa wax gaduudan oo kuusan oo futada ka so raaraco khaas ahaan markii caruurta ay jiiranayaan, soo raaricista wuxuu noqon karaa in yar ama isaga dhan ayaa banaanka imaan karo.
Quraan quraanka kariimka. Waa kitaabka alle ﺍﻟﻠﻪ. Ku soo dejiyay nebi maxamed. Caruurta yar yari badanaa waay jiran yihiin waana arin iska caadiya oo k mida xaaladaha qoyska in caruurta jiran guriga lagu hayo. Sanadka ugu horeeya noloshooda waxa caruurta ku dhaca isku cel celis ahaan 6. 8 infakshanka hawo mareenka ku dhaca sanad kasta. Guud ahaan way ka yaraadaan infakshanka hawo mareenka ku dhaca usbuuc gudahii. Booqo hoyga barashada cilmiga sharciga ah xoolaha agoonta zako malaga bixinaayaa.
Qabyaalada xilibn goodax xawaadlaha itobiya ana matala. Saamaynta caruurta ay ku yeelato isha xaasidka ah. Youtube premium get youtube without the ads. Qamriga iyo mataga iyo dhiiga waa daahir waxaa dhahay umal bal ila fiiri. Qabyaalada xilibn goodax xawaadlaha itobiya ana matala. Caruurta caqiligooda.